Usuku lawyer kwi-Russia: ebalulekileyo nuances - Zonke abaqondisi-mthetho kwi-Russia! Oyena lawyer portal.
Usuku lawyer kwi-Russia: ebalulekileyo nuances
Lawyer ngu Mhla ufumana i-esemthethweni iholide
Jurisprudence kweli lizwe lethu, njengoko i-science lisekwe kuphela kwi-th centuryNgelo xesha, abaqondisi-mthetho baba ngaphezu anomdla hayi kwi-inkumbulo, umthetho, kodwa ngeendlela ukuba systematize isemthethweni izenzo, apho, njengokuba sisazi, rhoqo contradict ngamnye enye, ekubeni disunited.
Hayi wonke umntu uyayazi malunga nayo, kodwa nangona kunjalo ihlala ikho.
Kwi-phinda ka-Upetros, Omkhulu, jurisprudence waba esifundiswa isijamani abaqondisi-mthetho. Elinolwazi izicaka umthetho wesizwe lemveli wabonakala kuphela isiqingatha century kamva. Imfuneko systematize imithetho banyanzeleka nabaqondisi-mthetho ukuphakanyiswa umsebenzi. Enyanisweni, ezinzima ukufezekiswa abo umphinda-phinde ngo unako kubizwa i-Code of Imithetho. Isiseko Russian jurisprudence kubeka isijamani, kodwa zethu achievements entsimini yalo science baba? noticeable nkqu ngoku. Isikolo umthetho waba zembali. Kwi-ekuqaleni kweminyaka ye-Soviet Empire abaqondisi-mthetho babebaninzi kakhulu knowledgeable kuba society. Ngowe, abasemagunyeni baqalisa ukugcina okhethekileyo bhalisa - ngayo oku kubandakanya ulwazi malunga abantu abaya kuba isemthethweni imfundo. Usuku lawyer kwi-Russia wabonakala hayi emva disintegration ye-Union, nangona kunjalo, emva perestroika, enkulu, yaba inzala waphakama phakathi izicaka umthetho umthetho. Yabo khondo lobungcali-mfundo lilonke sele kuba kujike ethandwa kakhulu rhoqo ngonyaka. Kwaba ngelo xesha ukuba private abaqondisi-mthetho kwaye notaries, bailiffs, noomantyi, njalo njalo baqalisa ivele.
Baya elibalulekileyo indima ebalulekileyo kuyo yonke into
Namhlanje, umhla lawyer kwi-Russia ngu afanelekileyo, kuba aba bantu kweli lizwe kuba buninzi. Baya kuba nkqu kwezabo iimbumbano kwaye corporate iimanyano. Wonke umntu uthi ukuba Us ngu kwimo umthetho. Kunjalo, ingakwazanga zithe ngoko ke ukuba isemthethweni science engafikanga kwaphuhliswa. Lawyer ngu mhla kwi-Russia wabonakala hayi ke ixesha elide eyadlulayo. Eli phulo lenziwa yi-Moscow Isixeko Duma deputies. Xa kuqaliswayo, bathumela a proposal ukuba i-Association of abaqondisi-mthetho ka-Us. Ebutsheni, phulo waba exhaswa Dmitry Medvedev. Kwaba yimfuneko ukuqinisekisa umhla omtsha iholide.
Xa kuqaliswayo, wafuna ukuba sifakwe kwi- februwari.
Namhla, njengoko uyazi, waba mbasa imini veneration ka-Yaroslava Kweziziingqondi. Kukhumbula ukuba yayinguyesu lowo wadala Russian inyaniso. Kwabakho kanjalo i-unye ukuba umhla Umhla lawyer kwi-Russia ngojanuwari.
Yintoni kwi end? Okokuqala oku iholide waba celebrated kweli lizwe lethu ngomhla we- disemba.
Kutheni ngale mini? Isizathu kukuba kwi-kude kweli lizwe lethu uthotho-mthetho izenzo waba amayelenqe, awathi kamva waba isiseko-matyala komhlaba.
Makhe isaziso, ukuba domestic abaqondisi-mthetho namhla mbasa njengoko umhlaba.
Ngomhla we-lawyer, i-kwababekekileyo kweelwimi ngu awarded. Iwonga ngu 'Lawyer Lonyaka'. Kubalulekile awarded kwi-mphathiswa, umthetho abaya kuba negalelo hayi kuphela uphuhliso bale mihla jurisprudence, kodwa kanjalo ezingaqhelekanga neendlela zobuchwepheshe yomfanekiso zanamhla Us njengokuba isemthethweni kwaye yesininzi state. Sergei Alekseev - lokuqala ophumeleleyo. Yena yathatha inxaxheba kwinkqubo drafting-Siseko kwaye Zasekuhlaleni Ikhowudi. Ngokubanzi, candidates ingaba ngenyameko esikhethiweyo. Ukhetho ngu leqela le nkqubo, njengoko kukho plenty ka-ezinzima candidates kuba namhlanje. Elinolwazi abaqondisi-mthetho kwi-Russia ingaba numerous.
Ipropati Ukwahlula ngendlela Florida wokuqhawula umtshato
De juridische Status en Functies van de Bank van Rusland - Bank van Rusland